Home Wararka Soomaalida ku dhaqan Islii oo ka mudaaharaaday eedayn loo soo jeediyay
Soomaalida ku dhaqan Islii oo ka mudaaharaaday eedayn loo soo jeediyay
Xildhibaan Yuusuf Xasan Cabdi oo Baarlamaanka Kenya kasoo galay Degmada Kamakunji ayaa ka falceliyay hadal uu sheegay Senator Kimani Wamatangi oo ah in Xaafadda Islii lagu iibiyo Hubka sharci darrada ah.
Yuusuf ayaa sheegay in Maxkamad ay u gudbinayaan dacwad ka dhan ah Senatar-ka si uu usoo bandhigo caddeymaha eedeemaha la xiriira in hubka lagu iibiyo goobo ganacsi oo ku yaalla Xaafadda Islii.
“Waxa aan Maxkamadda ka dalbaneynaa in Senator Kimani Wamatangi uu soo bandhigo Caddeymaha hubka uu sheegay in lagu iibiyo Islii, waxa aan ka dalbanayaa in uu raaligelin siiyo Dadka uu ka been sheegtay” ayuu yiri Xildhibaan Yuusuf Xasan.
Xildhibaan Yuusuf Xasan Cabdi ayaa hadalkiisa sii raaciyay in xubno uu kamid yahay ay baareen hubka uu sheegay Senatorka in lagu iibiyo Xaafadda Islii balse baaristooda ay ku waayeen caddeymo ama raad muujinaya jiritaanka warkaan.
Dowladda Kenya ayaa feejignaan gelisay Ciidamada ammaanka & kuwa sirdoonka oo culeys saaray Xaafadda Islii oo ah deegaanka ugu badan ay ku nool yihiin Soomaalida Kenya joogta si ay uga hortagto qaraxyo & Dilal ka dhaca Magaalada Nairobi.
Kenya ayaa cabsi ka muujisay qaraxyadii ka dhacay Magaalada Kampala Caasimadda Uganda, Xukuumadda Nairobi ayaa Xoogga saartay soohdinta ay la wadaagto Soomaaliya & Uganda si ay uga hortago qaraxyo.